ChiGiriki moussaka: chinyakare mabikirwo | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 05/09/2021 10:00 | Nyama Recipes
Moussaka ndeimwe yehupfumi hweGreek gastronomy. Inozivikanwa pasi rese, yakafanana ne lasagna, asi inotsiva zvidimbu zvepasta yezvikamu zveyiplantplant. Wakave nemukana wekuzviedza here? Iye zvino kuti iwe unogona kuwana aubergines pamusika, inguva yekuzviita!
Moussaka kana Musaka vakapindira izvi zvidimbu zvehaplant yakakangwa negwayana nyama nemadomasi. Iyo yekubheka yapera nebechamel muto unofukidza yekupedzisira nyama nyama uye isina huso hwakasviba muchoto. Uye kunyangwe akawanda mabikirwo asingaisanganise, panguva ino ndaida kuwedzera iyo nhindi yemabhatiri mbatatari inowanikwa mumabhuku mazhinji ekubika uye iyo inobvumira yakachekwa yakachena yeMusaka.
Ini handisi kuzokupusisa, kuita Musaka haisi nyaya yehafu yeawa. Kune zvakawanda zvakafanira gadziriro Kuti upedze iyi recipe uye kunyangwe zviri nyore, unofanirwa kuzviita! Saka kuti utore mukana wenguva yako, kuraira kwangu ndekwekuti kana uchinge waisa, ita sosi huru yeMoussaka kuti ufare nayo kwemazuva maviri. Kuti upedze menyu yako iwe unongoda chete a dhizeti isina kujeka.
Moussaka kana Musaka ndeye nzira yechinyakare yechiGreek umo zvidimbu zveyipuroplant uye minced gwayana zvinopindirwa. Edza vhezheni yedu!
2 yepakati aubergines
2 matapiri, akachekwa uye akachekwa hafu yesentimita
450 g minced gwayana kana nyama yemombe
1 clove gariki, minced
3 madomasi akaibva, akasvuurwa uye akachekwa
½ girazi rewaini chena
Grated chizi yegratin
25 g. Zveupfu
25 g. yemafuta
460 ml. mukaka
Cheka maabergines muzvikamu zvehafu-sentimita uye tinozviisa pabepa rinopinza. Wedzera munyu wemunyu uye varege vazorore kuti vadzinge mvura.
Kunyange, fry mbatatisi mugango rine mafuta mazhinji kusvikira nyoro. Kamwe nyoro, isu tinovaburitsa kunze, dhurena uye kuchengetedza.
Mupani rimwe chete asi nemafuta mashoma kwazvo izvozvi fry the eggplant zvimedu nezvikwata. Patinovabvisa, tinovaisa muchinesefa kudzinga iwo oiri yakawandisa tobva tachengeta.
Mushure mezvo, pasina kuchinja pani sunga anyanisi uye garlic, yakarungwa. Mushure memaminitsi mashanu tinowedzera nyama uye fry kusvikira yatanga kuchinja ruvara.
Saka, tinowedzera thyme uye tomato chaiyo. Sanganisa zvakanaka, vhara uye ubike pamusoro wepakati mukati kwemaminetsi makumi maviri kuitira kuti nyanya idonhe uye nyama ipedze kubika.
Pashure wedzera waini uye bika maminetsi gumi nemashanu zvakanyanya zvekuti mvura yakawandisa inopwa.
Isu tinotora mukana wenguva diki iyoyo ku gadzirira bechamel. Kuti tiite izvi, tinonyungudutsa bhotela mupani uye tobva tawedzera hupfu hwatichabika kwemaminetsi mashoma tichimhanyisa musanganiswa nezvimiti zvishoma. Zvino, uye tisingaregi kurova, isu tinowedzera mukaka zvishoma nezvishoma kusvikira tazadzisa gobamel gobvu kwatinobva tawedzera munyu, mhiripiri uye piniki yenzungu.
Zvino zvatave nezvose zvaitwa, isu tinogona kungoisa izvo, nepo tinopisa huni kusvika ku170ºC.
Isu tinozora chakuvhe chakanakira hovhoni uye tinoisa mbatatisi pachigadziko. Wobva wagadzikwa yeiiiplant uye imwe nyama yatinogovanisa zvakanaka uye nekupwanya zvishoma. Ipapo isu tinodzokorora maitiro: rukoko rweaubergines uye nhete yenyama.
Kupedza isu tinovhara ne bechamel uye kusasa nechesi yakagadzirwa.
Isu tinoisa sosi muchoto kwemaminitsi gumi nemashanu. Mushure mezvo, tinosimudza tembiricha yeovhenji kuenda ku15º uye tinobika kwemaminitsi mashanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Nyama Recipes » ChiGiriki moussaka: chikafu chetsika